Madaxweynaha Pakistan oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirada cusub ee Soomaaliya – Sawiro - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Pakistan oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirada cusub ee Soomaaliya – Sawiro
July 23, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha dalka Pakistan Mamnuun Xuseen oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomaya Khadiija Maxamed al-Makhsuumi.
Islamabad-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Pakistan Mamnuun Xuseen ayaa waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiyi doona dalkaas Khadiija Maxamed al-Makhsuumi.
Qaabiilaada safiirada cusub ee Soomaaliya ayaa si heer sare ah loo maamuusay, iyadoo cutubyo katirsan ciidamada Pakistan ay salaam siiyeen safiirada ayna u garaaceen astaanta dalka Soomaaliya.
Ciidamada baamboyda Pakistan oo salaan sharaf siinaya safiirada cusub ee Soomaaliya Khadiija Maxamed al-Makhsuumi.
Safiirada cusub oo ku labisan dharka dhaqanka Soomaalida ayaa lagu qaaday gaariga faraska oo ah hab maamuuseed sare oo loo sameeyo dibloomaasiyiinta la kulma Madaxweynaha dalkaas.
Safiirada cusub Soomaaliya ee dalka Pakistan Khadiija Maxamed al-Makhsuumi oo lagu wado gaari faras.
Khadiija Maxamed al-Makhsuumi ayaa horey u soo noqotay safiirada Soomaaliya u fadhida dalka Ciraaq.
Safiirada cusub ee Soomaaliya Khadiija Maxamed al-Makhsuumi oo qaadanaysa salaan sharaf.
Dalalka Pakistan iyo Soomaaliya ayaa ah labo wadan oo Islaam ah oo ka wada tirsan ururka iskaashiga Islaamka, sidoo kalena leh xiriir taariikhi ah.
Ganacsiga u dhaxeeya labada dal ayaa lagu qiyaasaa inuu ku kaco malaayiin dollar sanad walba.
Ugu dambayna, tirakoob la sameeyay dhawaan ayaa sheegaysa in ilaa 3,000 oo Soomaali ah ay ku nooshahay dalkaas kuwaasoo badankood arday ah halkaas wax-kabarta.
May 3, 2019 Masuuliyiinta sare ee ka qeybgali doonta shirka Garoowe oo bilaabay in ay yimaadaan Garoowe